यूहन्ना ६ अध्यायको रूपरेखा
येशू पाँच हजारलाई खुवाउनुहुन्छ (यूहन्ना ६:१-१४)
येशू पानीमाथि हिँड्नुहुन्छ (यूहन्ना ६:५-२१)
ठूलो जमात येशूलाई खोज्छन् (यूहन्ना ६:२२-२९)
येशू--जीवनको रोटी (यूहन्ना ६:३०-५९)
धेरै चेलाहरू येशूलाई त्याग्छन् (यूहन्ना ६:६०-७१)
येशू पाँच हजारलाई खुवाउनुहुन्छ
यूहन्नाको छैटौं अध्यायमा येशूको अर्को आश्चर्यकर्मको उल्लेख छ (हेर्नुहोस्, यूहन्ना ६:१४)। अघिल्ला पाँच अध्यायहरूमा येशूले अन्य कुन आश्चर्यकर्महरू गर्नुभएको थियो?
येशूले पाँच हजारलाई खुवाउनुभएको आश्चर्यकर्म चारैओटा सुसमाचारका पुस्तककालेखकहरूले उल्लेख गरेका छन्। उक्त घटना यूहन्नाको छैटौं अध्यायमा मात्रै नभई मत्ती १४:१५-२१, मर्कूस ६:३२-४४ अनि लूका ९:१२-१७ मा पनि पाइन्छ। बाइबलले यसलाई चारपटक उल्लेख गरेको तथ्यबाट यो एउटा महत्त्वपूर्ण आश्चर्यकर्म थियो भन्ने बुझिन्छ। गालील समुद्रको अर्को नाउँ के हो (यूहन्ना ६:१)? __________________। उक्त विशाल ताललाई प्यालेस्टाइनको मानचित्रमा भेट्टाउनुहोस्। येशूले गर्नुभएको यस आश्चर्यकर्म यही गालील समुद्रको तीरमा भएको थियो। घटनामा उल्लेखित सानो केटोसँग भएका दुइटा साना माछाहरू सम्भवतः यही समुद्र (ठूलो ताल) बाट पक्रिएका थिए (यूहन्ना ६:९ हेर्नुहोस्)।
मानिसका यति ठूला भीडहरूले येशूलाई पछयाउनुको खास कारण के थियो? (यूहन्ना ६:२ पढ्नुहोस् र ठीक उत्तरमा गोलो चिन्ह लगाउनुहोस्):
तिनीहरू मुक्ति पाउन र आफ्ना पापहरूको क्षमा पाउन चाहन्थे
तिनीहरू येशूलाई आफ्ना प्रभु तथा मालिकको रूपमा अपनाउन चाहन्थे र उहाँका जुनसुकै पनि आज्ञाहरू मान्न चाहन्थे
रोगीहरू उहाँद्वारा निको पारिएका देखेका थिए
तिनीहरू नयाँ जन्म पाउन चाहन्थे
येशूले आश्चर्यकर्म गर्नुभई खुवाउने काम गर्नुहुँदा त्यहाँ कति जना मानिसहरू उपस्थित थिए? यस आश्चर्यकर्मलाई “पाँच हजारलाई खुवाइएको आर्श्चर्यकर्म” भनी प्रायः उल्लेख गरिन्छ, तर वास्तवमा त्यहाँ पाँच हजारभन्दा धेरैलाई खुवाइएको थियो। हामी यूहन्ना ६:१० मा देख्दछौं त्यहाँ प्रायः ________ ____________ पुरुषहरू थिए। यसमा स्त्री र बाल-बालिकाहरूको गन्ती गरिएको छैन (मत्ती १४:२१ मा हेर्नुहोस्)। यदि हामीले स्त्री र बाल-बालिकाहरूको समेत हिसाब गर्‍यौं भने जम्माजम्मी मानिसहरूको संख्या आठ-दश हजार वा त्यो भन्दा बढी भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। के तपाईंले १०,००० वा त्यो भन्दा बढी मानिसहरूको भीड देख्‍नु भएको छ (सायद कुनै खेलकुद कार्यक्रममा)? मानौं तपाईंले ती सबैलाई खाना खुवाउनु पर्‍यो। तपाईंले खाद्यान्न पसलमा कति पैसा खर्च गर्नुपर्ला?
फिलिप बाह्र चेला मध्येका थिए। हामीले फिलिपलाई पहिलो पटक यूहन्ना १:४३ मा भेट्यौं। येशूले फिलिपलाई के भन्नुभयो (यूहन्ना ६:५)? _____________________________________ ____________________________________________________। यो कुरा उहाँले फिलिपको जाँच्न गर्नका निम्ति भन्नुभएको थियो तर उहाँ आफैले जे गर्न लाग्नुभएको सो उहाँलाई अघिबाटै ________ ________ (यूहन्ना ६:६ )।
फिलिपको सोचाइमा यतिका धेरै मानिसहरूका निम्ति खाना किनेर खुवाउनु एक असम्भव कुरो थियो। दुई सय दिनारको रोटी तिनीहरूमध्ये हरेकले थोरै-थोरै लिए तापनि तिनीहरूका निम्ति पर्याप्‍त हुनेथ्यो र (यूहन्ना ६:७)? ____________। दुई सय दिनार ठूलै रकम हो। चाँदीले बनेको रोमी सिक्कालाई दिनार भनिन्थ्यो। एउटा सरदर ज्यालादारीले एक दिनको ज्याला बराबर एक दिनार पाउँथ्यो। दुई सय दिनार कमाउन झण्डै __________ दिन काम गर्नुपर्थ्यो। एक दिनको काम बापत तपाईं या तपाईंका बुबाले कति रकम पाउनुहुन्छ? त्यसलाई २००ले गुणन गर्नुभयो भने फिलिपले कति धेरै पैसाको कुरा गरिरहेका थिए भनेर तपाईंले अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ।
फिलिपले बरु यसो भन्नुपर्थ्यो: “प्रभु, यतिका धेरै मानिसलाई किनेर खाना खुवाउनु भनेको हाम्रो निम्ति असम्भव कुरा हो। यदि तपाईं यी मानिसहरूलाई खुवाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले नै केही न केही गर्नुपर्छ। एउटा अलौकिक कामकै खाँचो छ। त्यस्तो गर्न हामी सक्दैनौं तर परमेश्वर सक्नुहुन्छ। यी मानिसहरूका निम्ति जे असल लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। हामी तपाईंकै भर पर्छौं।”
अर्का चेला आन्द्रियासले एउटा केटोलाई ल्याए जससँग पाँचओटा जौका रोटी र दुइटा ससाना माछा थिए। के अन्द्रियासलाई यति थोरै खानेकुरा भोकाएका भीडहरूका निम्ति पर्याप्‍त हुन्छ भन्ने लागेको थियो (यूहन्ना ६:९)? ____________। त्यसबेलाका जौका रोटी आजकलका पाउरोटी जस्ता ठूला थिएनन् अनि ती दुइटा माछा पनि सानै थिए। कति थोरै!
त्यस केटोसँग जस्तै हामीसँग पनि धेरै थोक नहोला, तैपनि हामीसँग भएको थोरैलाई हामीले उहाँलाई नै दियौं भने उहाँले आश्चर्यपूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईंको योग्यता र प्रतिभा थोरै छ? के तपाईंसँग जे छ त्यसलाई तपाईंले प्रभुलाई दिनुभएको छ? मेरो अभाव प्रशस्तता बन्दछ जब त्यो म परमेश्वरलाई चढाउँछु। विश्वासद्वारा मैले त्यसलाई उहाँको हातमा राखिदिँदा उहाँमा त्यो गणितीय हिसाबले वृद्घ हुनेछ, आशिषित बन्नेछ अनि उहाँकै महिमाका निम्ति त्यसको प्रयोग भएको देखिनेछ।
फेनी क्रस्बी (सन् १८२०-१९१५) एउटी अन्धी स्त्री थिइन् जसका थुप्रै लोकप्रिय भजनहरू इसाई जगतमा आजसम्म गाइन्छन् (“महान् सृष्टिकर्ता परमेश्वरको जय”, “येशू हुन् मेरो ...” आदि)। उनको जीवनलाई हेर्दा परमेश्वरले एक व्यक्तिको सानो खुबीलाई पनि प्रयोग गर्न र आशिष दिन सक्नुहुन्छ भन्ने सत्यता प्रस्ट हुन्छः
एउटी सानी अन्धी केटी, देख्‍न पनि नसक्ने
केवल सानो खुबी भएकी,लेख्थिन् साना कविता उनले।
त्यही थोरै क्षमतालाई चढाइन् उनले प्रभुलाई
र सारा इसाई जगत नै गाउँछन् आज रमाउँदै।
यी सानी अन्धी केटी को हुन् तिनी?
नाउँ उनको अमर छ, उनी हुन् फेनी क्रस्बी।
प्रशस्त घाँस भएको चउरमा येशूले मानिसहरूलाई समूह-समूहमा बस्न लगाउनुभयो (यूहन्ना ६:१०। बसन्त ऋतुको याम थियो त्यो (यहूदीहरूको निस्तार चाड यसै ऋतुमा पर्छ (यूहन्ना ६:४), यसकारण त्यहाँ थुप्रै घाँस थियो। के मानिसहरूलाई खान दिनु अघि प्रभु येशूले परमेश्वरलाई धन्यबाद चढाउनुभयो (यूहन्ना ६:१)? ________________। के पावल प्रेरितले खाना खानु अघि परमेश्वरलाई धन्यबाद चढाउँथे (प्रेरित २७:३५)? तपाईं नि, खानु अघि परमेश्वरलाई धन्यबाद चढाउनुहुन्छ? ______________।
आश्चर्यकर्मकै विवरण भने यूहन्ना ६:११-१३ मा पाइन्छ। के मानिसहरूले खान चाहे जति खाए? ________। तिनीहरू टन्न अघाए? ____________। त्यहाँ “उब्रेका टुक्राहरू” पनि थिए कि? __________। त्यहाँ कुनै खाना खेर गयो (यूहन्ना ६:१२)? ____________। यसले हामीलाई यो सिकाउँछ, हामीले कुनै पनि कुरा खेर फाल्नु हाम्रो प्रभुको इच्छा होइन। विचार गर्नुहोस्, आज मानिसहरूले खानेकुरा तथा अन्य कुराहरू कसरी खेर फाल्छन्।
येशूले त्यो आश्चर्यकर्म कसरी गर्नुभयो, हामीलाई बताइएको छैन। हामीलाई यति थाह छ--उहाँले त्यो कार्य गर्नुभएकै हो। परमेश्वर जसले कुनै चीजबिना नै संसार सृष्टि गर्नुभयो, जसले पानीलाई दाखमद्यमा परिणत गर्नुभयो, उहाँले नै त्यस दिन ५ ओटा रोटी र २ ओटा माछा लिएर अचम्म प्रकारले थुप्रै-थुप्रै रोटी र माछाहरू बनाउनुभयो।
बाइबलमा विश्वास नगर्ने कतिपय मानिसहरू, त्यस दिन वास्तवमा के भएको थियो भन्ने विषयमा अर्कै खालको तर्क दिन्छन्। तिनीहरू यसो भन्छन्: “त्यस दिन मानिसहरू सबैले नै खाना लिएर आएका थिए जसलाई शुरुमा आफूहरूसितै लुकाएर राखे तर त्यस सानो ठिटाले आफ्ना रोटी र माछाहरू बाँड्न भनी दिएको देख्‍ने बित्तिकै तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थी भावना त्यागे अनि तिनीहरू सबैले आ-आफ्ना खाना झिकेर एकअर्कालाई बाँड्न थाले।” के बाइबलले यस्तै भएको थियो भनेर बताउँछ त? ____________________। कति मानिसहरू आफ्ना अविश्वासका कारण बाइबलका आश्चर्यकर्महरूलाई पन्छाउन चाहन्छन् तर यूहन्ना ६:१४ले त्यस दिनको घटना कस्तो घटना थियो भनी प्रस्टै बताएको छ? येशूले जे गर्नुभयो त्यो एउटा ____________ थियो।
यसभन्दा अघि पनि परमेश्वरले हजारौं मानिसहरू (करिब २० लाख भन्दा बेसी)लाई खुवाउनुभएको इतिहासको बारेमा तपाईंलाई याद छ? त्योचाहिँ मोशाको समयमा भएको थियो जतिबेला इस्राएलका सन्तानहरू उजाडभूमिमा थिए। मानिसहरूलाई खुवाउन हरेक दिन परमेश्वरले “मन्ना” दिनुभयो (यूहन्ना ६:३१ मा हेर्नुहोस्)। सयौं वर्ष पछाडि आएर येशूले यहूदीहरूका ठूला जमातहरूलाई गालील समुद्रको छेउमा खुवाउनुभयो र तिनीहरूमध्ये धेरैले मोशालाई सम्झे होलान्। साथै मोशाले संसारमा एक ठूला भविष्यवक्ता आउनेछन् भनी भविष्यवाणी गरेका कुरालाई सम्झे होलान् (यूहन्ना ६:१४ लाई व्यवस्था १८:१५,१९ सित तुलना गर्नुहोस्)।
येशूले विशाल भीडलाई खुवाउनुभएपछि, मानिसहरूले उहाँलाई के बनाउन खोजे (यूहन्ना ६:१५)? ____________। तिनीहरू यस कुरामा यति जोशिला थिए कि तिनीहरू उहाँलाई जबरजस्ती _______________” समेत तयार थिए (यूहन्ना ६:१५)। येशू हामीलाई चाहिएकै जस्तो राजा बन्न योग्य हुनुहुन्छ भनी तिनीहरूले किन सोचे होलान्? अन्य व्यक्तिलाई भन्दा येशूलाई नै राजा बनाउन चाहनुको पछाडि के कारण थियो? तिनीहरूले शायद यसरी सोचे, “येशू हाम्रो राजा भए भने हाम्रो सबै समस्याको हल हुन्छ। विरामी पर्दा निको पार्न सक्ने (यूहन्ना ६:२), भोक लाग्दा खाना दिने (यूहन्ना ६:११-१२) व्यक्ति राजा भए त भइहाल्यो नि। उहाँले हाम्रो सबै शारीरिक तथा आर्थिक खाँचोहरू पूरा गरिदिनुहुनेछ।” तर यस्तो सोचाइमा एउटा समस्या छ। येशू संसारमा आउनुभएको प्रमुख कारण मानिसको शारीरिक र भौतिक खाँचो पूरा गर्नलाई होइन। उहाँ मानिसका आत्मिक खाँचोहरू पूरा गर्न आउनुभएको हो। येशू जान्नुहुन्थ्यो मानिसको वास्तविक समस्या पेट र शरीरको होइन तर हृदयको हो।
तब येशू भीडहरूबाट फुत्त निस्कनुभयो अनि एउटा ठाउँ खोज्नुभयो जहाँ उहाँ __________रहन सक्नुहुन्थ्यो (यूहन्ना ६:१५)। त्यस रात उहाँका चेलाहरू एउटा डुङ्गामा चढे अनि कपर्नुहुमतिर लागे। येशूले नै तिनीहरूलाई पारिपट्टि जान अह्राउनुभएको थियो (मत्ती १४:२२ सँग दाँज्नुहोस्)। विशाल तलाउमा तिनीहरू जाँदै गर्दा अचानक एउटा डरलाग्दो आँधी चल्यो (यूहन्ना ६:१८)। यूहन्ना ६:१९ अनुसार तिनीहरू तीन-चार माइलजति गएका थिए अर्थात् तलाउको बीचतिर पुगेका थिए।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभएको आज्ञा कुन थियो, तलाउको पारिपट्टि जानू कि तलाउको बीचमा पुगेर डुब्नू (मत्ती १४:२२ मा हेर्नुहोस्)? _______________________________। आँधी चल्दा चेलाहरूले प्रभुमा भरोसा गर्दै यसो भन्नुपर्नेथ्यो: “प्रभु, हामीलाई पारिट्टि जाने आज्ञा तपाईंले नै दिनुभएको हो जुन आज्ञाअनुसार हामी अगाडि बढेका हौं। तपाईंले नै हामीलाई सुरक्षासाथ पारी पुर्‍याउनुपर्छ। आँधी ठूलो छ तर हाम्रो प्रभु आँधीभन्दा ठूलो हुनुहुन्छ।”
विशाल तलाउमा आँधी चलिरहेकै बेलामा चेलाहरूले अचानक एउटा आश्चर्यकर्म देखे। तिनीहरूले के देखे (यूहन्ना ६:१९)? __________________________________________ ________________________। एउटा असम्भव कुरा येशूले गर्नुभयो। प्राकृतिक नियम (गुरुत्वाकर्षणको नियम आदि) अनुसार मान्छेलाई पानीमाथि हिँड्न असम्भव छ। तर के परमेश्वर आफूले बनाउनुभएका नियमहरूभन्दा महान् हुनुहुन्न र? __________________। उहाँ आफैले रच्नुभएका नियमहरूले परमेश्वरलाई बाँधेर राख्‍न सक्दैन। पुरानो नियमका समयहरूमा समेत परमेश्वरले उहाँ गुरुत्वाकर्षणका पनि प्रभु हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुएको थियो (२ राजा ६:१-७ मा पढ्नुहोस्)।
चेलाहरूले येशूलाई देखेर “तिनीहरू ______________” (यूहन्ना ६:१९) कारण उनीहरूले उहाँलाई भूत-प्रेत भन्ठाने (मत्ती १४:२६ मा हेर्नुहोस्)। तिनीहरू डराउनुहुँदैनथ्यो, किन? (यूहन्ना ६:२० ) ________________________________________________। त्रास र विश्वास एउटै घरमा सँगै बस्न सक्दैनन्। जब विश्वास भित्र आउँछ, तब त्रास निस्की जानुपर्छ। प्रभुमा भरोसा राख्‍नेहरू जीवनका जति नै ठूला आँधीहरूमा पनि डराउनु पर्दैन।
त्यस तलाउमा गरिएको अर्को आश्चर्यकर्म के थियो जसको बारेमा यूहन्नाले हामीलाई बताएका छैनन् (मत्ती १४:२८-३१ मा हेर्नुहोस्)? ____________________________________। पत्रुस र येशू डुङ्गाभित्र पस्ने बित्तिकै के-के भयो (मत्ती १४:३२)? ___________________ ____________________________________________। यूहन्ना ६:२१ अनुसार त्यहाँ के भयो? _____________________ ____________________________________। यो डुङ्गा यात्रा त साँच्चै अविस्मरणीय यात्रा थियो। यस रातको यात्रा चेलाहरूले कहिल्यै बिर्सेनन्।
ठूला भीडहरू येशूलाई खोज्छन्
जस्तो हामीले अघि हेरिहाल्यौं, मानिसहरू येशूलाई के गर्न चाहन्थे (यूहन्ना ६:१५)? ______________________________________________। तिनीहरू यस्तो राजा चाहन्थे जसले तिनीहरूका शरीरहरूलाई निको पारोस् र तिनीहरूका पेटहरू भरिदेओस् र तिनीहरूलाई रोमी साम्राज्यको शासनदेखि स्वतन्त्र गरिदेओस्। यहूदीहरूको त्यो भीडले येशूलाई भेट्टाउन सकेनन् तरैपनि तिनीहरूले उहाँलाई खोजी नै रहे (यूहन्ना ६:२२-२४)। भोलिपल्ट तिनीहरूले उहाँलाई तलाउको पारिपट्टि भेट्टाए (यूहन्ना ६:२५)। यी मानिसहरू येशूलाई किन खोजिरहेका थिए (यूहन्ना ६:२६ पढ्नुहोस र ठीक उत्तरमा गोलो लगाउनुहोस्):
किनभने तिनीहरूले आश्चर्यकर्महरू देखेका थिए
किनभने तिनीहरू आफ्ना पापी मार्गहरूबाट फकर्न चाहन्थे
किनभने तिनीहरू नयाँ गरी जन्मन चाहन्थे
किनभने तिनीहरू परमेश्वरबाटको अनन्त जीवनको दान लिन चाहन्थे।
येशूले यिनै मानिसहरूसँग यूहन्ना ६:२७ मा बोल्नुभयो। हामीले खाने दाल-भात, रोटी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण केही चीज छ? ________। येशूले तिनीहरूलाई पेटभरी माछा र रोटी खुवाउनुभएको कुरा साँचो हो तर त्यहाँ अर्को खानेकुरा पनि छ जुन येशूले मानिसहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ, यस्तो खानेकुरा जुनचाहिँ __________________ सम्म रहिरहन्छ (यूहन्ना ६:२७ )। कुनै चीज खाएर सदाको लागि जिउनु कस्तो हुन्थ्यो। यस्तो खानेकुराको लागि पो मानिसले परिश्रम गर्नुपर्ने हो।
यहूदीहरू यस्तै खानेकुराको लागि काम गर्न उत्सुक भएझैं देखिन्थे। तिनीहरूले सोधे, “परमेश्वरका कामहरू गर्नका निम्ति हामी के गरौं?” (यूहन्ना ६:२८)। येशूले यस प्रश्‍नको उत्तर प्रस्टै दिनुभयो। मान्छेले एउटा कुन काम गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (यूहन्ना ६:२९)? उहाँ (पिता )ले पठाउनुभएको व्यक्ति येशू ख्रीष्टमा वि ____________ गरेको चाहनुहुन्छ। त्यो एउटै काम कुन हो जुन कामले परमेश्वरलाई खुशी पार्छ (हिब्रू ११:५-६)? ______________। मुक्ति नपाएको व्यक्तिले पालन गर्नुपर्र्ने परमेश्वरको पहिलो आज्ञा कुन हो (१ यूहन्ना ३:२३ को पहिलो खण्डमा हेर्नुहोस्)? ____________________ __________________________________। यूहन्ना ६:२९ अनुसार “परमेश्वरको काम” (परमेश्वरले हामीबाट माग गर्नुभएको काम) कुन हो?
असल कामहरू गर्नु
येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु
दस आज्ञा पालन गर्न प्रयास गर्नु
सारा सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न प्रयास गर्नु
यहूदीहरूले गर्न नचाहेका एउटै काम यही थियो। तिनीहरू विश्वास गर्न होइन, दे ______ चाहन्थे (यूहन्ना ६:३०)। तिनीहरू चिन्हहरू देख्‍न चाहन्थे। यी मानिसहरूले भने, “देख्‍न पाए विश्वास गरौंला!” तर चिन्हहरू देखेर विश्वास उत्पन्न हुने होइन। यी मानिसहरूले अघिबाटै कस्ता कस्ता आश्चर्यकर्म र चिन्हहरूलाई देखिसकेका थिए (यूहन्ना ६:२,१४)? _________________________ ___________________________________। के तिनीहरूले देखेका हुन् (यूहन्ना ६:३६)? ______________। के तिनीहरूले विश्वास गरे (यूहन्ना ६:३६)? ______________।
येशू जीवनको रोटी हुनुहुन्छ
यूहन्ना ६:२७ मा येशूले उल्लेख गर्नुभएको खानेकुरा कस्तो किसिमको खानेकुरा हो? यहूदीहरू अलमल्ल परे। के येशूको तात्पर्य “म तिमीहरूलाई मोशाको समयमा इस्राएलीहरूले खाएका मन्ना जस्तै स्वर्गबाटको रोटी दिनेछु” भन्ने थियो (यूहन्ना ६:३१)? होइन, येशूले मन्नाभन्दा बढी उत्तम चीजको कुरा गरिरहनुभएको थियो: “मेरा पिताले तिमीहरूलाई स्वर्गबाट ________ _______ दिनुहुन्छ” (यूहन्ना ६:३२)। यो साँचो रोटी कस्तो रोटी हो? यूहन्ना ६:३३ बाट हामी साँचो रोटी भनेको के हो भनेर सिक्छौं। साँचो रोटी भनेको ...
यस्तो कुरा हो जुनलाई तपाईं मुखमा हालेर खान सक्नुहुन्छ
एक व्यक्ति हो--जो स्वर्गबाट तल ओर्ली आउनुहुन्छ अनि जसले मानिसहरूलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ।
के यहूदीहरू यस्तो खालको रोटी पाउन उत्सुक भएझैं देखिन्थे (यूहन्ना ६:३४)? ____________। जीवनको रोटीले हुनुहुन्छ (यूहन्ना ६:३५)? ____________। कस्ता मानिसहरू कहिल्यै भोकाउनेछैनन् (यूहन्ना ६:३५)? ______________________________________। कस्ता मानिसहरू कहिल्यै तिर्खाउनेछैनन् (यूहन्ना ६:३५)? _____________________________ _____________________। के तपाईंले यी दुइटा कामहरू गर्नुभयो? __________________। येशू ख्रीष्टले मानिसको आत्मिक भोक र तिर्खा पूरै मेटाउनुहुन्छ। ख्रीष्टकहाँ आउन इन्कार गर्ने र उहाँलाई विश्वास गर्न इन्कार गर्नेहरू कहिल्यै तृप्त हुनेछैनन्।सदाका निम्ति सुरक्षित र सुनिश्चित
उहाँकहाँ आउनेलाई येशूले कस्तो प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ (यूहन्ना ६:३७)? _________________ _______________________। “कुनै रीतिले अफाल्नेछैन” भन्नुको मतलव हो “कहिल्यै कदापि अफाल्नेछैन”! उहाँकहाँ केवल सरल विश्वासमा आउने मानिसलाई उहाँले कहिल्यै पनि अफाल्नुहुनेछैन! कसैले भन्लाः “म त यति ठूलो पापी हुँ, भो मलाई येशूको नजिक जान डर लाग्छ। उहाँले मलाई स्वागत गर्नुहुन्नहोला, यसैले मलाई डर लाग्छ”। यस मानिसलाई तपाईं के सल्लाह दिनुहुन्छ? याद राख्‍नुहोस्, उहाँकहाँ आउने सबै नै स्वागत गरिनेछन् अनि कतिजना अफालिनेछन् (यूहन्ना ६:३७)? __________________________________________।
येशू ख्रीष्टले विश्वास गर्नेहरूमध्ये कतिजनालाई गुमाउनुहुनेछ? (यूहन्ना ६:३९) ____________________________________। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येक नै अनन्तसम्म सुरक्षति हुन्छ। परमेश्वर बचाउनु मात्र हुन्न तर बचाइराख्‍नु हुन्छ। पुत्रलाई देख्‍ने (पाठ २ मा “उजाडस्थानको साँप” शीर्षकमुनि यूहन्ना ३:१४-१६ सम्बन्धी टिप्पणीलाई हेर्नुहोस्) र उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेकले ______________ ____________ पाउँछ (यूहन्ना ६:४०)। विश्वासीहरूले अनन्त जीवन पाऊन् र त्यो तिनीहरूले नगुमाऊन् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ (यूहन्ना ६:३८-४०)। यी पदहरूले हामीलाई साँचो विश्वासीले आफ्नो मुक्तिलाई गुमाउन असम्भव छ भनी सिकाउँछन्।
के यहूदीहरूले येशू स्वर्गबाट नै ओर्ली आउनु भएको हो भन्ने कुरामा विश्वास गरे (यूहन्ना ६:४१,४२)? ________________। तिनीहरू येशूको मनुष्यत्वलाई मात्र देख्‍न सक्थे (यूहन्ना ६:४२)। तिनीहरूले उहाँ स्वर्गबाटको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँ यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो भन्ने कुरा बुझेनन्। येशू स्वर्गबाट ओर्ली आउनुभएको हो भनी प्रस्ट सिकाउने यूहन्ना अध्याय १ (पद १-१८ ) मा हामीले के सिक्यौं? येशू यूसुफका छोरा हुनुहुन्नथ्यो (यूहन्ना ६:४२ ), तर वास्तवमा उहाँ पत्रुसले पछि स्वीकार गरेजस्तै “____________________ का पुत्र” हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना ६:६९)!
यी यहूदीहरूले उहाँको बारेमा के विचार गर्दैथिए भनी के येशू सब जान्नुहुन्थ्यो (यूहन्ना ६:४३)? ______________________। यी यहूदीहरू ख्रीष्टकहाँ आउन सकेनन् (यूहन्ना ६:४४) किनभने तिनीहरू उहाँकहाँ आउन चाहेनन् (दाँज्नुहोस्, यूहन्ना ५:४०)। आफ्नो अविश्वासमा तिनीहरू मुक्तिदाताकहाँ आउन इन्कार गरे। जस्तै, उत्पत्ति ३७:४ मा उल्लेख छ, यूसुफका दाज्यूहरूले तिनीसँग राम्ररी बोल्न सक्दैनथे। के कारण यूसुफका दाज्यूहरू यूसुफसित ठीक किसिमले बोलचाल गर्न सकेनन्? तिनीहरूले चाहेनन् त्यसैले सकेनन्। आफ्नो भाइप्रति तिनीहरूको डाहा र घृणाको पापको कारण तिनीहरूले तिनीसित राम्ररी बोल्न चाहेनन्। यसरी नै पापी मानिस पनि मुक्तिदाताकहाँ आउन इच्छा गर्दैन। बरु ऊ अन्धकारमै रहन चाहन्छ (यूहन्ना ३:१९-२०)? अनन्त जीवन पाउनका लागि गर्नुपर्ने एउटै काम जुन येशूले अनिवार्य छ भनी भन्नुभएको छ उसले त्यो काम गर्न इन्कार गर्छ। त्यो के काम हो (यूहन्ना ६:४७)? __________________________________। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकले नै अनन्त जीवनको उपहार प्राप्‍त गर्छन्।
मोशाको समयमा इस्राएलीहरूले खाएका मन्नाको विचार गर्नुहोस्। के मन्ना खाएर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाए (यूहन्ना ४:४९)? ________________। के येशूले दिनुभएको रोटी खाने व्यक्ति कहिल्यै मर्नेछन् (यूहन्ना ६:५०)? ______________। त्यो व्यक्ति “________भरि जिउनेछ” (यूहन्ना ६:५१)।उहाँको शरीर खानु र उहाँको रगत पिउनु भनेको के हो?
येशूले यहूदीहरूलाई अरु कुरा भन्दै जानुभयो जसले तिनीहरूलाई अझ ताजुब बनायो। मानिसहरूलाई येशूले कुन रोटी खान दिनुभयो (यूहन्ना ६:५१)? “त्यो रोटीचाहिँ, जो म दिनेछु मेरो __________ हो”। के यहूदीहरूले यस कुरालाई बुझे (यूहन्ना ६:५२)? ________________। येशूले मानिसलाई पिउनालाई के दिनुभयो (यूहन्ना ६:५३-५४)? __________________________ ___________________________।
एक वर्षपछि म यरुशलेममा एउटा क्रूसमा मारिनेछु भनी येशू जान्नुहुन्थ्यो। उहाँको शरीर एउटा क्रूसमा टगाँइनेथियो, उहाँको रगत बहाइनेथियो। संसार बाँच्न सकोस् भनेर उहाँ मर्नुहुनेथियो (यूहन्ना ६:५१ का अन्तिम छओटा शब्दहरूलाई पढ्नुहोस्)। येशूले आफ्नो शरीर र रगतको कुरा गर्नुको तात्पर्य यही नै थियो।
तर कसरी एउटा मानिसले ओफ्नो शरीर खान र रगत पिउन सक्छ? येशूले भन्नुभयो, यसो नगर्ने व्यक्तिसँग जी ________ छैन (यूहन्ना ६:५३)! उहाँको शरीर खाने अनि उहाँको रगत पिउने व्यक्तिसँग भने अ __________ जी ________ छ। उहाँको भनाइको तार्त्पर्य के थियो?
“रोमन क्याथोलिक” नामक समुदायका व्यक्तिहरूले आफूहरूले प्रभुभोज (जसलाई उनीहरू “मास” भन्छन्) खाँदा ख्रीष्टकै शरीर खाइरहेका र उहाँको रगत पिइरहेका हुन्छौं भनी दावी गर्छन्। रोटी र दाखरस येशूकै वास्तविक शरीर र रगतमा परिवर्तन हुन्छन् अरे। तर यहाँ येशूले नरभक्षी (अर्थात् मान्छेको मासु खाने) बन्न कदापि सिकाइरहनुभएको थिएन। प्रभुभोजको रोटी र दाखरस त येशूले हाम्रा निम्ति गरिदिनुभएको कामको सम्झना गराउने सामाग्री मात्र हुन् (१ कोरिन्थी ११:२४,२५--“मेरो ______________ मा यो गर्ने गर”)। होइन, येशूले उहाँको मासु खाने र उहाँको रगत पिउने कुरा गर्नुको तात्पर्य अर्कै थियो। एक व्यक्तिले ख्रीष्टलाई कुन अर्थमा “खान” सक्छ? एक व्यक्तिले ख्रीष्टलाई कसरी ग्रहण गर्न सक्छ? यूहन्ना छैटौं अध्यायको चावी शब्द हो “विश्वास”। यूहन्ना ६:२९-४७ मा यस चावी शब्द भएका पदहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? ______ ______ ______ ______ ______ ______ (छ पटक )। यूहन्ना ६:५४ को खास अर्थ बुझ्न सबभन्दा उत्तम उपाय हो यसलाई योसँग मिल्ने अर्को पद यूहन्ना ६:४० सँग दाँजेर हेर्नुः
यूहन्ना ६:४० यूहन्ना ६:५४
अनन्त जीवन कोसित हुन्छ र अन्तिम दिनमा को बौराइनेछ? “हरेक जन, जसले __________लाई देख्छ र उनीमाथि _______________ गर्छ।” अनन्त जीवन को सित हुन्छ र अन्तिम दिनमा को बौराइनेछ? “जसले मेरो ____________ खान्छ र मेरो _____________ पिउँछ।”
त्यसैले, ख्रीष्टको शरीर खाने र उहाँको रगत पिउने व्यक्तिले हो? तिनीहरू सबै नै हुन् जस-जसले ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछन् (अर्थात् ख्रीष्ट मेरो उद्घारको निम्ति शारीरिक रूपमा क्रूसमा मर्नुभयो र आफ्नो रगत बहाउनुभयो भनी विश्वास गर्ने हरेक व्यक्ति)! यस व्यक्ति ख्रीष्टसँग एउटा वास्तविक र गजबको आत्मिक सम्बन्धमा जोडिएको हुन्छ (यूहन्ना ६:५६)।
खानेकुराले मान्छेलाई कुनै फाइदा दिँदैन जबसम्म उसले त्यो खाँदैन। यदि खाना थालमै रहन्छ र पिउने कुरा गिलासमै रहन्छ भने उसलाई के फाइदा हुन्छ र? हामी आफैले (अर्थात् व्यक्तिगत तवरले ) खानालाई लिनुपर्छ र त्यसलाई हाम्रो मुखभित्र हाल्नुपर्छ, अनि निल्नुपर्छ र त्यसलाई हाम्रो आफ्नै अङ्ग बनाउनुपर्छ। येशू ख्रीष्टमा पनि यही नै सिद्धान्त लागु हुन्छ। विश्वासैद्वारा हामीले उहाँले हाम्रा निम्ति क्रूसमा के गरिदिनुभएको छ, त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नै ग्रहण गर्नुपर्छ। उहाँ मेरै निम्ति मर्नुभयो। उहाँले मेरै निम्ति आफ्नो रगत बहाउनुभयो। उहाँ मलाई नै बचाउन क्रूसमा झुण्डिनुभयो। के तपाईंलाई यस्तो मुक्तिदाताको खाँचो छ? के तपाईंले उहाँलाई तपाईंको प्राण बचाउन दिनुभयो? के तपाईं आफ्नो सारा हृदयले उहाँमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसो हो भने तपाईं स ____________ जि ____________________ (यूहन्ना ६:५८)।
पछयाउनेमध्ये धेरैले येशूलाई त्याग्छन्
एकदिन अघि मात्र येशूले भीडहरूलाई खुवाउनुभएको थियो अनि त्यसबेला त्यहाँ हजारौं हजार मानिसहरू उपस्थित थिए। तर यूहन्ना छैटौं अध्यायको अन्ततिर धेरैले येशूलाई छाडेर जान्छन्। तिनीहरू पेट भर्ने रोटीको चाहना गर्थे तर येशूको वचनलाई भने वास्ता गर्दैनथे। यी “जोशिला” चेलाहरूमध्ये धेरैको (यूहन्ना ६:३४ हेर्नुहोस्) जोश थोरै बेरमै हरायो। तिनीहरू आफ्ना पेट भर्ने खानेकुराको खोजी गर्थे तर आफ्ना आत्मालाई चाहिने खानेकुराको खोजी गर्दैनथे। तिनीहरूले उहाँको शिक्षालाई पचाउन सजिलो ठाने कि गाह्रो (यूहन्ना ६:६०)? __________। खास समस्या येशूको भनाइमा थिएनः “जुन वचनहरू म तिमीहरूलाई भन्दछु ती ______________ हुन् र ____________ हुन्” (यूहन्ना ६:६३)। खास समस्या मान्छेको हृदयमा थियो। तिनीहरूका पाप र अविश्वासका कारण तिनीहरू यी जीवनका वचनहरू ग्रहण गर्न तयार भएनन्।
को साँचो विश्वासी बन्छ र को बन्दैन भनेर के येशू जान्नुहुन्छ (यूहन्ना ६:६४)? ________। को स्वर्ग जानेछ र को जाँदैन भनेर के उहाँलाई अगाडि नै थाह छ? ________। के येशूलाई शुरुदेखि नै यहूदाको बारेमा सब थाह थियो (यूहन्ना ६:६४,७०-७१)? ____________। परमेश्वर सबथोक जान्नुहुन्छ! तपाईं विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईं स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आज नै हो, ख्रीष्टकहाँ आउने र उहाँलाई विश्वास गर्ने। परमेश्वर यही गर्न तपाईंलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ (१ यूहन्ना ३:२३ अनि यूहन्ना ६:२९ हेर्नुहोस्)। यदि तपाईं ख्रीष्टकहाँ आउन र उहाँलाई विश्वास गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ भने यसमा दोषी को हुन्छ? ________________। के ख्रीष्टले तपाईंलाई आउन भनी निम्तो दिनुभएको छ (मत्ती ११:२८)? __________।
येशूका धेरैजना चेलाहरूले के गरे (यूहन्ना ६:६६)? ______________________। यूहन्ना ८:३१ सँग दाँज्नुहोस्। प्रभुका धेरैजना चेलाहरू थिए तर साँचो चेलाहरू भने थोरै थिए। उहाँको ________ लागिरहनेहरू त्यहाँ थोरै मात्र थिए (यूहन्ना ८:३१)। ती थोरै मध्येमा के पत्रुस पनि पर्थे (यूहन्ना ६:६७-६९)? ________। प्रभुसित अघिल्लो दिनमा हजारौं मानिसहरू भए तापनि आखिरमा कतिजना मात्र बाँकी भए (यूहन्ना ६:६७)? _______। अनि चाँडै नै थप अर्को व्यक्तिलाई पनि उहाँले गुमाउन लाग्दै हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो ____________ (यूहन्ना ६:७०-७१)।
तपाईं नि? तपाईं पत्रुस जस्तै प्रभुसँगै टाँस्सिने व्यक्ति बन्नुहुन्छ कि प्रभुदेखि पछि हट्ने यहूदा जस्तो? हामी प्रत्येकले येशूको प्रश्‍नलाई विचार गरौं:
“के तिमीहरू पनि ________ चाहन्छौ?”
जाने ठाउँ अन्य कुनै छ र (यूहन्ना ६:६८)? उहाँदेखि पछि नहट्नुहोस् बरु उहाँकहाँ आउनुहोस्! उहाँले तपाईंलाई कहिल्यै अफाल्नुहुनेछैन (यूहन्ना ६:३७)।